Nhau - Shandong Limeng yakaitirwa pamhemberero yebazi idzva refekitori
Musi waMarch 6, 2019, Shandong Limeng yakaitirwa pamhemberero yebazi idzva repafekitori. Limeng vadyidzani vakapindawo muchiitiko ichi.
Kuti kuwedzere kugadzirwa kwekambani uye kuvandudza mamwe mapurojekiti, Limeng Pharm inodyara 1,2 miriyoni mapaundi kutenga 10 maeka nyika. Bazi idzva fekitori richavakirwa mashopu e4000 mativi emamita. Uye ichave yapera mumwedzi gumi.
Parizvino, kambani yeLimeng yanga iine mishonga yechinyakare yechiChinese, zvekudya, zvigadzirwa zvekugadzira zvigadzirwa, musangano wezvekurapa, musangano wemukaka uye yechinyakare Chinese mushonga wekuchera musangano, uye vese vakapasa zana-chiuru chekuchenesa musangano chitupa. Zvigadzirwa zvedu zvakatumirwa kuAustralia, USA, Puerto Rico nedzimwe nyika nenzvimbo. Yaisanganisira michero yemiti, gummy candy, kumeso kumeso uye isina-ruoko utachiona uye zvichingodaro.
Mushure mekuvhurwa kwebazi idzva refekitori, mapurojekiti ejummy anozowedzerwa kuita mitsara mina yekugadzira mumusangano wekuwedzera chikafu. Mumusangano wekurapa wezvokurapa, nzvimbo idzi dzichawedzerwa kusvika pamazana mashanu emamirimita uye nekuwedzeredzwa kusvika gumi yekugadzira tambo yekugadzira iyo yekumeso kumeso masiki uye ekurapa ekuvhiya kumeso kumeso. Kugadzirwa kwemazuva ese kuchave pamamiriyoni maviri. Hutachiona hunoraswa sampling chubhu inogadzirwa zvakare mumusangano wedu.
Limeng Pharm's inoshandirawo pamwe neSGS, Bsi Uk uye mamwe epasirese anozivikanwa echitatu-bato yekuyedza masangano kuti asimbise qulity manejimendi sisitimu, CE chitupa uye zvichingodaro kuve nechokwadi chemhando yezvigadzirwa mhiri kwemakungwa.
Iyo kambani inotsigira bhizinesi manejimendi manejimendi "Kupona paMhando, Kukudziridza paChikwereti, Yakanangana neTekinoroji, Mhindu paManagement" Iyo inonyatso kushandisa inoenderana mitemo uye nemirau mirau yekugadzira uye manejimendi, inosuma yepamusoro manejimendi maitiro ekunyatso kusanganisa tekinoroji, kugadzira, musika mubhizinesi, uye inowana zvakakosha mhedzisiro, iyo inoisa hwaro hwakasimba hwebhizinesi kukura kune imwe nhanho nyowani uye gadzira yakajeka makore.